Juventus oo 3-0 kukarbaashtay Barcelona +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Juventus oo 3-0 kukarbaashtay Barcelona +Sawirro
Kooxda Juventus oo ku tumatay Barcelona ayagoo joogtay Turin dalka Talyaaniga. Laacibka heerka caalami ee dalka Argentina Paulo Dybala ka dhax muuqday kulankaan.
Paulo Dybala ayaa hogaanka u dhiibay Juventus kaliyah ciyaarta oo socoto daqiiqadii 7-aad goolkaas oo ku yimid cadaadis weyn oo la saaray Barca kaas oo saarnaa tan iyo biloowgii ciyaarta iyo daqiiqadii 1-aad markii la yeeriga seeriga biloowga ciyaarta.
Ciyaarta ayaa noqotay mid iska dhax dhaxaad ah ka hor inta uusan Messi haleelin inuu kubad uga dhax dusiyaa daqiiqadii 20-aad Andres Iniesta balse Gigi Buffon ayaa ka hor istaagay taas oo keentay in kaliyah 2 daqiiqo kadib uu dhaliye goolkii labaad ee ciyaarta iyo isla goolkiisii labaad ee ciyaarta da’a yarka reer Argentina Paulo Dybala kaas oo 2-0 ka dhigay ciyaarta daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta waxaana lagu kala nastay 2-0 oo ay Juventus ku hogaamineeyso.
Markii la isku laabtay Barca ayaa badashay Mathieu oo daafac kaga ciyaaraaye qeybtii hore waxaana soo galay Andrea Gomez oo qadka dhaxe ahaa si ay ciyaarta wax uga badalaan balse Juventus ayaa heshay goolkii 3-aad ee ciyaarta markii Giorgio Chiellini uu madax ka dhaliye daqiiqadii 55-aad ee ciyaarta.
Juventus ayaa ku adkaatay 3-0 waxaana Barcelona loo garaacay si qurux badan.